‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण होस्’
२०७२ माघ २४ आइतबार, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गाढा मित्रता कायम गर्न र समृद्धिका लागि साझा क्षेत्रको पहिचान गर्ने आफ्नो भारत भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणको तयारीका सिलसिलामा विकास र आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले भने– ‘‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सबै हिसाबले उपलब्धिपू ... बाँकी अंश»
खोटाङ काँग्रेसबाट केही नयाँ, केही पुराना निर्वाचित
२०७२ माघ २४ आइतबार, काठमाडौं । दूई ओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको खोटाङ जिल्लामा भएको काँग्रेसको क्षेत्रीय निर्वाचनबाट संस्थापन पक्षकै धेरै नेताहरु विजयी भएका छन् । क्षेत्र नं. १ बाट सर्वाधिक मत ल्याएर काँग्रेसका युवा नेता तथा पुर्वसञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालका स्वकीय सचिव जितेन्द्र ठकुरी महाविधेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनु भएको छ । त्यसैगरी नरेश श्रेष्ठ, सर्वदन राई, सुवास पोख्रेल, दिनेश राई र विरकाजी राई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नु भएको छ । महिला आर ... बाँकी अंश»
माइक्रोबस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुग्यो
२०७२ माघ २३ शनिबार, त्रिशूली (नुवाकोट)। काठमाडौँबाट त्रिशूलीतर्फ आउँदै गरेको बा१ज ७५८३ नंको माइक्रोवस पासाङल्हामु राजमार्गको मदानपुर–८ केउरिनीमा शनिबार दिउँसो दुर्घटनामा परि ११ को ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परी १२ घाइते भएका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार माइक्रोबस सडकदेखि २०० मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी चालक बेलकोट–२ घर भएका २२ वर्षीय दामोदर कँडेलको सनाखत भएको छ । दुर्घटनास्थलमा त्रिशूली सैन्य तालिम केन्द्रमा तालिम लिइर ... बाँकी अंश»
निगमका ट्याङ्कर रक्सौलतर्फ, मोर्चा कार्यकर्ता धपाइए
२०७२ माघ २३ शनिबार, वीरगन्ज। वीरगन्ज–रक्सौल भन्सार नाका सञ्चालन भएपछि नेपाल आयल निगमले इन्धन भर्न केही ट्याङ्करलाई आज भारतीय आयल निगम रक्सौल डिपोमा पठाएको छ । सीमावर्ती रक्सौलस्थित भारतीय भन्सार र भारतीय आयल निगम रक्सौल डिपोका अधिकारीले इन्धन भर्न ट्याङ्कर पठाइदिन भनेपछि निगमले त्यसतर्फ ट्याङ्कर पठाएको निगमको वीरगन्ज कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, आज बिहान करिब १२ वटा ट्याङ्कर इन्धन भर्नका लागि रक्सौल डिपोतर्फ पठाइएको हो । लामो समयदे ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपराष्ट्रपति पुन अस्पताल भर्ना
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौं। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा भर्ना भइका छन् । सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ जानुभएका उपराष्ट्रपति पुनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो । एक्कासि मुटुको चाल बढेर अप्ठ्यारो भएपछि सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर उपराष्ट्रपति पुनलाई राजधानी ल्याइएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गरिरहनुभएका बेला मुटुमा समस्या देखिएपछि ... बाँकी अंश»
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण हुन्छःसञ्चारमन्त्री राई
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौं। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै गर्ने भारत भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण हुने भएकाले भ्रमणका विषयमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे । पर्वत–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको वनभोज तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री राईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका समयमा नेपालको हितविरुद्ध सन्धि सम्झौता हुन्छ कि भन्ने आशंका सम्बन्धमा देशको गरिमामा आँच आउने खालका कुनै सम्झौता नहुने भ ... बाँकी अंश»
गोली प्रहारबाट एकको मृत्यु, दुई घाइते
२०७२ माघ २३ शनिबार, महेन्द्रनगर (धनुषा) । धनुषाको दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा नेपाली काँग्रेसका नेतामाथि गोली प्रहार गरिएको छ ।अज्ञात समूहले प्रहार गरेको गोली लागि एक नेताको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । धनुषाको बालाबाखर गाविस–४ का नेपाली काँग्रेस धनुषा १ नम्बर क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रतिनिधि ४५ वर्षीय राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई गएराति अज्ञात समूहले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बालाबाखर गाविस–४ स्थित काँग्रेसका समानुपातिक सांस ... बाँकी अंश»
क्यान्सर बिरुद्ध अन्नपूर्णको साइकल र्‍‍‍‍‍याली
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौ । अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले क्यान्सर रोगविरुद्धको जनजागरण अभियान अन्तर्गत बृहत साइकल र्‍‍‍‍‍याली गरेको छ । विश्व क्यान्सर दिवसको अवसर पारेर ‘क्यान्सर रोगको रोकथाम सम्भव छ’ भन्ने मुख्य नारा सहित क्यान्सर बिरुद्ध जनचेतना जगाउन बृहत साइकल र्याली आयोजना गरेको हो । र्यालीमा राजनीतिक दलका नेता, प्रशासक, क्यान्सर रोगविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका बिरामी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी, सुर ... बाँकी अंश»
प्रधानसेनापति स्वदेश फिर्ता
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री मित्रराष्ट्र भारतको छदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कनुभएको छ । प्रधानसेनापति क्षत्रीलार्ई बलाधीकृत रथी बलदेवराज महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो । मित्रराष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्षको निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति क्षत्री यही माघ १८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । भ्रमणका क्रममा उहाँलाई भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भारतीय स्थल सेन ... बाँकी अंश»
‘नाकाबन्दी अन्त्यको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी’
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले अघोषित नाकाबन्दी औपचारिक रुपमै चाँडै अन्त्य हुने बताउनुभएको छ । भोजपुरे सेवा समाज, काठमाडौँको आठौँ विशेष साधारणसभाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रमुख नाका वीरगन्जमा भएको अवरोध शुक्रबार हटेकोप्रति सङ्केत गर्दै भन्नुभयो,“औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी हटेको घोषणा नभए पनि हिजो(शुक्रबार)देखि वीरगन्जको मुख्य नाका खुलेको छ, अब चाँडै नाका पूर्ण रुपमा खुलेको सन्देश आउँछ ।” प्रवक्ता राईले संविधान निर् ... बाँकी अंश»
परकम्पबाट ७१ जना घाइते
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । शुक्रबार राति १०:०५ बजे सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु तार्केघ्याङ आसपास केन्द्रबिन्दु भएर गएको ५.५ रिक्टर स्केलको परकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा ७१ जना घाइते भएका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज पोखरेलले घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको, १९ जना उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेको र भौतिक क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । काठमाडौँमा ६०, भक्तपुर र ललितपुरमा ११ जना ... बाँकी अंश»
ललितपुर काँग्रेस क्षेत्रीय प्रतिनिधिको परिणाम
२०७२ माघ २३ शनिबार, ललितपुर । नेपाली काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबार सम्पन्न तीन वटै क्षेत्रीय निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएको छ । काँग्रेस क्षेत्र नं १ र २ बाट सभापतिमा राजन घिमिरे र महेश खड्का विजयी हुनुभएको छ । यसै गरी क्षेत्र नं ३ बाट गजेन्द्र महर्जनले जित हासिल गरेका छन् । क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्षतर्फ मीनकृष्ण महर्जन, उदयशम्शेर राणा, मथुराप्रसाद घिमिरे, ऋषिराम घिमिरे, गणेशबहादुर केसी र खोमप्रसाद घिमिरे महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएको मतदान अधि ... बाँकी अंश»
वैदेशिक रोजगार बोर्डले दस हजार युवालाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम दिने
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई लक्षित गरी १० हजार युवालाई निःशुल्क सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने भएको छ । गन्तब्य मुलुकहरुमा अदक्ष जनशक्ति रोजगारीका लागि गएर विभिन्न खाले समस्यामा परेपछि बोर्डले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गर्न लागेको हो । वार्षिक रुपमा तीन हजार युवालाई तालिम दिँदै आएको बोर्डले यो वर्ष १० देखि १२ हजारसम्मलाई विभिन्न विधामा सीममूलक ताल ... बाँकी अंश»
माइक्रोबस दुर्घटनामा आठको मृत्यु
२०७२ माघ २३ शनिबार, त्रिशूली(नुवाकोट) । काठमाडौँबाट अपराह्न १ बजे पश्चिमतर्फ त्रिशूली बजार जाँदै गरेको वा १ ज ७५८३ नंको माइक्रोबस मदानपुर गाविस–८, केउरिनीमा खस्दा बसमा रहेका आठ जना यात्रुको मृत्यु भएको छ । सडकबाट पाँच सय फिट तल खस्दा भएको सो दुर्घटनामा छ जना घाइते भएको नुवाकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । मृत्यु हुनेमा धेरैजसो त्रिशूली सैनिक तालिम केन्द्र, मैथलीमा तालिम लिइरहेका सैनिक जवान रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनाको पूर ... बाँकी अंश»
वागमती सफाइमा सत्र मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । वागमती सफाइको १४३ औँ हप्तामा आज बानेश्वर क्याम्पसदेखि मीनभवन पुलसम्मको क्षेत्रमा सफाइ गरी १७ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको छ । आजको सफाइमा जागृतिनगरस्थित सुकुम्वासी टोलवासी समिति गठन गरेर ब्यानरसहित सहभागी भएका थिए । सफाइमा सुकुम्वासी बस्तीका बालबच्चा समेत सहभागी भएको अभियन्ता एवम् नेपाल विज्ञापन सङ्घका महासचिव नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सफाइपछि यस क्षेत्रको पानी परीक्षण गर्दा पहिलेको भन्दा गुणस्तर सुध्रिएको ... बाँकी अंश»
अरब सागरमा न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले मौसममा खराबी
२०७२ माघ २३ शनिबार, काठमाडौँ । अरब सागरलगायत राजस्थान आसपासमा देखिएको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण नेपालको मौसममा खराबी आएको छ । न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभावले आज देशभर मौसम बद्ली हुनुका साथै केही चिसो महसुस भएको छ । उक्त प्रणाली नेपालको पश्चिमी र दक्षिण पश्चिमी भेगबाट गए राति प्रवेश गरेका कारण नेपालको आकाश बादलले ढाकेको मौसमविद् सुवास रिमालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “राति नेपाल प्रवेश गरेको प्रणालीले मुलुकभर बद्ली भएको छ, यो प्रणाली आज बेलुकाबा ... बाँकी अंश»
सेभ हाउस नहुँदा समस्या
२०७२ माघ २३ शनिबार, बैतडी । सेभ हाउस अर्थात् सेवा केन्द्र नहुँदा दार्चुलामा हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलालाई राख्न समस्या हुने गरेको छ । हिंसामा परेका महिला न्यायको लागि ग्रामीण भेगबाट सदमुकाममा आउने र सदरमुकाममा सेभ हाउस नहुँदा समस्या हुने गरेको प्रमुख नायब उपरीक्षक सुशीलसिंह राठौरको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलामा अभियुक्तका लागि हिरासत भए पनि पीडितलाई राख्न नमिल्ने भन्दै उहाँले कहिलेकाहीँ जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरेको समेत बताए ... बाँकी अंश»
चितवनमा नयाँ चरा फेला
२०७२ माघ २३ शनिबार, रत्ननगर (चितवन) । चितवनमा फेरि एउटा नयाँ चरा फेला परेको छ । वर्ड एजुकेसन सोसाइटी चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा चरा विज्ञ वासु बिडारीले जिल्लामा फेला परेको चरा नयाँ भएको पुष्टि भएको जानकारी दिए ।चितवनको मुख्य कार्यालय कसराबाट एक किलोमिटर पश्चिम पर्ने राप्ती नदीको दोभानमा उक्त चरा भेटिएको हो । ग्रेट ह्वाइट फ्रन्टेड नामको पानीमा बस्ने चरा फेला परेको हो । पाँच दिनअघि घुम्ने क्रममा नेचर गाईड हेमन्त दराई र उस्तव जङ्ग थापाले देखेर चराको तस्बिर लिनुभएको थ ... बाँकी अंश»
महायज्ञमा केसीले करिब रु छ लाख दान
२०७२ माघ २३ शनिबार, तुलसीपुर (दाङ)। दाङको तुलसीपुरमा बहुआयामिक सुविधा सम्पन्न सभागृह निर्माणका लागि आयोजना गरिएको श्रीमद्भागवत् महापुराण ज्ञानमहायज्ञमा तुलसीपुर–४ टिक्रापातु निवासी यमकुमारी केसीले रु छ लाख ६६ हजार ६६६ दान गरेका हुन् । सो दान महायज्ञमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । उनलाई मूल आयोजक समितिले शुक्रबार चमारेबाजासहित मण्डपसहित महोत्सवस्थलको परिक्रमा गराएको छ । महायज्ञको चौथो दिन शुक्रबारसम्ममा दानपेटिकामा करिब रु ३५ लाख जम्मा भइसकेको आयोज ... बाँकी अंश»
महभिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण
२०७२ माघ २३ शनिबार, इलाम। इलाम नगरपालिका–७ महभिरमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले रक क्लाइम्बिङसहित रक गार्डन र बाल उद्यान निर्माण सुरू गरिएको छ । महभिरस्थित प्रगति युवा समाजले रक क्लाइम्बिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माण सुरू गरेको हो । मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिबाट रु १० लाख विनियोजन गरी रक क्लाइम्बिङ, रक गार्डन र बाल उद्यानको काम सुरू गरिएको समाजका अध्यक्ष उमेश महतले बताए ।यसका लागि इलाम सदरमुकामस्थित ... बाँकी अंश»